Khuphela ngokuthe ngqo kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Khuphela i-Instagram ngqo
NgoFebruwari 5, 2019 0 IiCententarios 1152
Ukusuka kwi2018 Instagram Uye wongeza inketho yokusasaza bukhoma, kwaye kamsinya emva; Umsebenzi owongeziweyo: khuphela i-Instagram ngqo. Kuyaziwa ukuba eli qonga lithandwa kakhulu kunxibelelwano lwentlalo ngokufikelela okude; ukonwabele izigidi zabantu kwihlabathi liphela Oku kunokubonakaliswa iividiyo, iifoto, imifanekiso kunye Usasazo ngqo (Instagram TV - Instagram Live).
Ukongeza, abasebenzisi banokudlala ngobuchule babo; ukusebenzisa ezinye ze ukhetho olunikezelwayo Le nethiwekhi yentlalo, ekhoyo kwiifoto ezinje ngeefilitha, izakhelo, ukufana okushisayo kunye nemibala ye-retro, kunye iividiyo ziyafumanekaI-Abu Dhabi, iJakarta, iMelbourne, iCairo, phakathi kwabanye, ukuze kwabelwane ngayo nabalandeli.
Kanye kunye isicelo sihlasele Ngenxa yeefilitha ezinikezelwayo, ngenxa yokwahluka kwezitayile ezibonakalayo, isetyenziswa ngabalandeli ngokubanzi kwiplanethi iphela. Emva kokwabelana nabalandeli, inomdla wokukhuphela Umxholo othethwayo, ke kukho umsebenzi oluncedo kakhulu kwaye uya: khuphela ngqo ku Instagram. Injongo kabani ukugcina isixhobo esikwiselfowuni, ibali elifunwa ngumsebenzisi; Phambi kokuba inyamalale esiphelweni sosasazeko, esi sixhobo sinokusetyenziswa kaninzi iyimfuneko.
Zithini ngqo kwi-Instagram?
Yiyo Umsebenzi odityanisiweyo kwisicelo, apho iividiyo eziphilayo zidluliselwa ngendlela efanayo nakwi: Facebook, Twitter, Youtube kunye nePeriscope kwaye ekupheleni kokurekhoda okanye umchachazongokufanayo Iya kucinywa ngokuzenzekelayo.
Injongo yokukhuphela i-Instagram ngqo
Ngaphambili, bekungenakwenzeka ukulanda imixholo ekhoyo kwesi sicelo kuba iqonga lalingelolungiselelwe loo nto. Uninzi lwabasebenzisi luye lwafuna amandla Landa amabali, kunye nothumelo ikhutshelwe ukugcinwa, ziphinde zishicilele okanye ukhumbule nje ixesha elithile elikhethekileyo, ixesha elithile yobomi babo kwaye ndiyabulela kuko, kukho uhlaziyo olutsha olukuvumela ukuba ugcine ezi nkcukacha ngokusisigxina kwi i sixhobo nditsho nakwikhompyuter.
Ukukhuphela njani ngokuthe ngqo kwi-Instragram?
Amanyathelo alula, akukho mfuneko yokuba nolwazi oluninzi ngokubhekisele kwiinethiwekhi zentlalo okanye amaqonga amaqonga; Unokwenziwa ngesicelo esikhoyo kwifowuni ye-Android okanye kwi-Iphone. Njengokuhlaziywa kwe-v10.12 entsha; Kuyenzeka ukuba ugcine into nganye xa igqityiwe, isicelo sikwanokukhetha ukugcina i I-Instagram ngqo, kwikona ephezulu kwesokudla kwesikrini ngalo lonke ixesha umsebenzisi enayo, kunokwenzeka ukuba wabelane kwakhona kwakhona kwi-Instagram nakwamanye amanethiwekhi asekuhlaleni afana ne-Twitter okanye i-Facebook.
Ngenxa yoko, i-Instagram ikhangela ukuziqhelanisa nezicelo yabasebenzisi bayo; ukwenza ukuphuculwa okuqhubekayo okanye uhlaziyo ukubonelela ngenkonzo engcono, Iqonga elinye. Akukho mathandabuzo, lolunye ukhetho olufumanekayo kwinethiwekhi yokwabelana iimbali; kufanelekile ukuba Inqanaba lomntu okanye eleshishini, okuthetha nokuthatha ithuba lale ndawo yentengiso kunye nokuthengisa.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuphela baya kuyigcina iividiyo Ngaphandle kokubona ukuthanda, inani labantu abadibeneyo, okanye izimvo okanye intsebenzo phakathi kwabalandeli incoko ephakathi
Uhlaziyo olwakhiwe kwi-Instagram
Ngexesha lokuqalisa kwayo, i-Instagram ibonakaliswa ngokuba isicelo esisebenzayo, kodwa yona inemikhawulo emininzi. Okwangoku, zifakiwe imisebenzi emitsha; iyaqina ukusebenzisana komsebenzisi okanye komsebenzisi, ukonwabela umxholo wakho, kunye nabanye abalandeli. Oku kuthetha ukuba i-Instagram iye yane ukukhula ngokukhawuleza, emvumele ukuba afumane indawo ebalulekileyo kwindawo ye-cyber, ngakumbi ukusukela esongeza isixhobo Khuphela ngokuthe ngqo kwi-Instagram.
Olunye uhlaziyo ngokulandelelana kweziganeko
Kwi-2010, yayinokwabelana kuphela ngeefoto.
Kwi-2011, yintoni eyongezwa namhlanje Yazi njenge-hashtags, Ukwabelana ngeefoto zento enye. Le misebenzi ilandelayo nayo yafakelwa: amacebo okuphilayo ukuze usebenzise ifuthe lobuwena, ukuhlelwa komfanekiso, imida yokukhetha, ukujikeleza komfanekiso kunye neqhosha lokuhlaziya
Kwi-2013, abasebenzisi be-Instagram sele benayo enye indlela Abalandeli bethegi kunye nemifanekiso kuyo nayiphi na imifanekiso. Kwangonyaka omnye kongezwa I-Instagram Direct ukuthumela imiyalezo yabucala kunye neefoto ezinje nge: Facebook.
Ngexesha le-2015, besele kukho ithuba lokuba seta intengiso kwiqonga lezaziso ku-Facebook.
Kwi-2016, ukhetho lokufaka ividiyo kunye neefoto ixesha elincinci kwi-24Hrs longezwa.
Kwi-2018, ukhetho lokuhambisa iividiyo okanye iividiyo ziqhotyoshelwe I-Instagram TV, emva koko ukwazi ukhuphele i- I-Instagram ngqo.
Umbono wokuqala yayi upapasho olukhethekileyo lweefoto; kodwa ngokucela rhoqo kunye nezicelo ezivela kubasebenzisi; iqela lihambile izixhobo zokwandisa, kubandakanya okhetho lwe: hashtag yevidiyo Amabali e-Instagram phila nolunye uhlaziyo. Enye yezona zinto zibalulekileyo; yi Khuphela ngokuthe ngqo kwi-Instagram, ngenxa yoko, kunokwenzeka ukuba ukonwabele iqonga ngeemeko ezingcono; Ilungelo loluntu ngokuthe ngqo; kwaye kwakufanele oko beka kwindawo yokuqala zehlabathi elibonakalayo
1 Zithini ngqo kwi-Instagram?
2 Ukukhuphela njani ngokuthe ngqo kwi-Instragram?
3 Uhlaziyo olwakhiwe kwi-Instagram
4 Olunye uhlaziyo ngokulandelelana kweziganeko
Umbono we-SEO: Fumana indlela yokulawula
Funda ngeendlela zokuphucula i-SEO yakho kaGoogle